Ihe Ngwọta Kasịnụ Maka Nchịkwa Ndị Ọrụ
atụmatụ » Nchịkọta ọrụ
Nye ezigbo ndị ọrụ ohere ịnweta ọkwa ikike dị iche iche, mezie arụmọrụ ma chekwaa oge.
rịọ ka ngosi
Anyị ghọtara ihe ịma aka gị ...
Ozugbo ị gafere ụfọdụ ihe onwunwe dịka onye na-akwado gị, ị ga-ewe ụfọdụ ndị ọrụ iji nyere aka na azụmaahịa a na-adị kwa ụbọchị. Ọnụ ụzọ nke a dị ala karịa ọtụtụ ndị nwere ike iche. Ọzọkwa, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-amalite, ị nwere ike ikpebi ịchụpụ ụfọdụ ọrụ nchịkwa site na mbido iji wepụta oge iji rụọ ọrụ na mmepe azụmaahịa.
Maka ụlọ ọrụ njikwa ihe onwunwe na-agba ọtụtụ narị ụlọ ma ọ bụ ụlọ ezumike, enwere ihe ndị ọzọ achọrọ site na ịnwe ndị ọrụ ubi dịka ndị na-elekọta ụlọ ma ọ bụ ndị ọbịa na-ezute mgbe ha rutere. Enweghị oku ekwentị, WhatsApp mkparịta ụka na ọtụtụ isi ọwụwa nwere ike ịchọ, nsonaazụ ya ka nwere ike ịbụ nke na-eju afọ.
Kedụ ka ndị ọrụ ndị ọrụ Zeevou ga-esi enyere aka?
Zeevou na-enye gị ohere ịnye ezigbo ndị ọrụ gị ohere. Ma ha bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ndị na-elekọta ụlọ ma ọ bụ ndị na-enyocha ego, inwere ike ịnye otu ma ọ bụ ọtụtụ ọrụ na profaịlụ ha dabere na ibu ọrụ ha. Nke a na - enye gị ohere ịkekọrịta ozi ha chọrọ, na - enweghị inye ozi na - enweghị isi nke ị nwere ike ọ gaghị achọ ịkọrọ ha ma ọ bụ nke nwere ike ịba ụba.
Ọzọkwa, enwere ike ịnwe ohere ịnweta ndị ọrụ onwunwe. Nke a pụtara na mgbe ị na-ekenye ndị ọrụ ahụ ọrụ, ị gaghị enwe mgbagwoju anya site n'ịhụ ndagide ogologo oge na ndị ọrụ niile na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ gị, mana naanị ndị dị mkpa nwere ike ekenye ọrụ ahụ n'aka.
Ndị ọrụ niile etinyere na Zeevou nwere ike ịnweta kalenda na ọrụ ha site na ngwa weebụ anyị na-anabata, nke pụtara na enwere ike belata nkwukọrịta nke ukwu. Zeevou's Gbanwee Akụkọ atụmatụ ahụ na - enye gị ohere ịgbaso ihe mgbanwe dị iche iche ndị ọrụ na - eme na ntinye akwụkwọ ma ọ bụ ndepụta, ka ị nwee ike ịmata onye ị ga - esochi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ndị ọzọ gbasara mgbanwe.
Zeevou na-enyekwa gị ohere ịdebe nnweta ndị ọrụ, ndị na-elekọta ụlọ nwere ike ịrịọ akwụkwọ site na ha mobile ngwa, nke ị nwere ike ịnabata ma ọ bụ jụ.
← Gara aga Njirimara
Next Njirimara →